Inona no tsy mampitovy ny gorodona hazo matevina sosona sy ny gorodona hazo matevina misy sosona telo sosona - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no tsy mampitovy ny gorodona hazo matevina sosona sy ny gorodona hazo matevina misy sosona telo sosona
Ahitsio: Denny　2019-12-06　Mobile
Momba ny sosona ambonin'ny tany
(1) Fahasamihafana matevina
Ny sosona vita amin'ny hazo matevina telo-sosona dia telo santimetatra ny savaivony, ary ny sakeliny marobe dia 0.6-1,5 milimetatra ny hateviny.Ny soson-tany telo-sosona dia mety hahatratra hatrany amin'ny avo dimy heny ny haavon-joron'ny takelaka marobe marobe. Ao amin'ny indostrian-trano fanamboarana trano dia misy fehezan-teny toy ny "tabilao iray sy fitaovana telo", izany no hitantsika ao amin'ny vokatra vita. Ohatra, raha misy fanaka amidy dia zato kilao, dia ny hazo akana izay laniny dia mety mitentina telon-jato. Ny fahasamihafana kely dia hita taratra ao amin'ireo fitaovana mihetsika.
Ny maka ny hazo matevina telo sosona ny Shengxiang ho ohatra, ny sosona ny gorodona vita dia 3mm-4mm matevina, izay somary saro-bidy kokoa noho ny sosona ambonin'ny sosona maro, fa toy ny akora fototra lehibe, ny fanjifana ny akora dia. Betsaka, ary taratry ny lanjan'ny vokatra dia sarobidy.
Ny halalin'ny vokatra roa dia samy hafa.Tokony izay, ny sosona vita amin'ny rindrina mando telo-sosona dia sosotra 50% mahery farafahakeliny noho ny lozisialy lozisialy vita amin'ny hazo multilayer. Ny fahasamihafana dia mety hatramin'ny 5 henjana kokoa.
Ny fahasamihafana amin'ny asa tanana dia matihanina kokoa.Ny sosona vita amin'ny gorodona hazo miorina amin'ny sosona telo-sosona dia hazo vita amin'ny farafahakeliny farafahakeliny 3, raha ny sosona vita amin'ny gorodona vita amin'ny rindrina marobe matevina dia hazo vita amin'ny hazo.
Ilay antsoina hoe hazo vita amin'ny hazo (takelaka telo) dia manondro ny fihenan'ny vatan-kazatra.
Ilay antsoina hoe hazo rotary (multi-layer), izay antsoina koa hoe hazo planed, dia metaphor metaphorical kokoa.Ny tahaka ny fanintsanana ny paoma paoma ary mihodina ny manapaka ny hazo.Ny endrika voalohany aorian'ny fanendahana dia toy ny volon-paoma, fa tsy hazo fisaka. Rehefa vita ny fitsaboana dia voaroaka. Ny mampiavaka ilay hazo fihodinana fihodinana dia ny hazo notapahina dia manify, misy 0,6-2 mm ny hateviny, ary ny vokatra dia avo be.
Ny hazo fihodinana avy amin'ny Rotary dia manana taham-pamoahana ambony saingy manimba ny rafitry ny kitay ary tsy mijanona. Na dia manana fatiantoka lehibe aza ny hazo sawn, dia mitoetra kokoa noho ny fihodinana mihodinkodina ary tsy dia mirehitra loatra ny fikoropahana, ka avy amin'izany fomba fijery izany, ny vidin'ny dingana roa samy hafa dia misy sanda samihafa.
Momba ireo akora fototra
Ny akora fototra vita amin'ny hazo matevina telo sosona dia tapaka avy amin'ny birao manontolo. Amin'ny lafiny iray, dia mitaky amin'ny vanim-potoanan'ny hazo izy ary miaraka amin'izany dia mila fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny kamory.
Ny composite kitay hazo matevina miaraka amin'ny rindrina marobe dia miaraka miaraka, ary tsy misy takiana amin'ny hazo.
Mandritra izany fotoana izany, misy fanaintainana miparitaka eo anelanelan'ny akora fototra amin'ireo sosona telo, ary ny fizotran'ny fanodinana dia sarotra kokoa, saingy ny rafitra dia manome antoka fa ny akora fototra dia tsy hiteraka fiovana lehibe.Na dia ampiasaina amin'ny tontolo mafana aza izy ireo, tsy misy olana, maharitra Tsara kokoa.
Momba ny hidin-trano
Ny sosona telo-rindrina vita amin'ny hazo matevina dia azo atao ho tranoben-drano
Ny voalohany dia ny mampifandray ny hidim-baravarana tsy misy fanesorana ny Seams.Ny zava-dehibe dia ny hoe milamina kokoa ny tontolo iainana tsy mametraka lakaoly. Amin'ny lafiny iray, ny hidy dia manana fatiantoka betsaka amin'ny akora, ary etsy ankilany, mitaky teknolojia avo lenta sy fitaovana ary noho izany, marika lehibe sy orinasa ihany no afaka manao tsara kokoa. Noho izany dia kely fotsiny ny hidy misy vava malefaka izay manana takelaka bebe kokoa amin'ny vidin'ny famokarana.
Eo ambanin'ny tontolon'ny hafanana amin'ny gorodona, ny hidin-trano dia zava-dehibe indrindra.Izay aloha dia ny hoe salama kokoa sy milamina ny tontolo iainana ka tsy mila vongana rehefa mametraka ny hidim-baravarana. Ny maka ny gorodona hisaraka hanaovana fitsapana.Raha lalana matevina vita amin'ny hazo matevina telo sosona izany, satria tsy mitaky fitsaboana lakaoly, azo esorina tsy tapaka ny gorodonao raha tsy manimba ny atin'ny trano. Noho izany, dia nanoro hevitra ny fianakaviana fandroana amin'ny gorodona mba hisafidy gorodona karazana lakozia araka izay azo atao rehefa mifidy gorodona.
Momba ny fiarovana ny tontolo iainana
Ny maha samy hafa ny vidiny sy ny toetra mampiavaka ny lapoaly misy rihana telo-sosona sy ny pareta sosona maro. Misy ihany koa ny fahasamihafana lehibe amin'ny fampiasana ireo toetran'ireo fiarovana roa ireo.Moho ny fomba fijerintsika ny haingo an-trano, ny fahasalamana sy ny fiarovana dia zava-dehibe indrindra, noho izany dia minia manala azy io amin'ny farany aho.
Ny fahavoazana lehibe indrindra amin'ny vatan'ny olona naterak'io fitaovana haingon-trano io dia formaldehyde. Ny loharanon'ny formaldehyde dia lakaoly, ka ny atin'ny goto amin'ny tany dia olana lehibe.
Ny gorodona vita amin'ny hazo matevina telo-sosona dia ampitahaina amin'ny gorodona vita amin'ny rindrina matevina misy patelika raha resaka jerena.Haintsika fantatsika fa telo-sosona ihany no laminated miaraka, ary ny takelaka matetika dia 11 na 9 takelaka. Makà ohatra mora azo raha toa ka: ifangaroana ny takelaka 3, dia mila mampihatra lakaoly amin'ny andaniny roa ianao. Raha ampitambatra ireo takelaka 11 dia tokony ho refesina ny lafiny folo, fara fahakeliny. Tsy sarotra ny mahita avy amin'ity sehatra ity fa ny gorodona vita amin'ny hazo matevina telo-polo dia tsy misy atiny lakaoly ary mihavana kokoa amin'ny tontolo iainana. Ny hazo matevina telo sosona ampiasain'i Shengxiang dia azo lazaina hoe tontolo iainana, noho izany dia misy antoka kokoa.
Misy ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fizotran'ny fametrahana .. Ny iray amin'ireo vokatra roa azo ampiasaina tsy misy lakaoly, ary ny iray kosa dia mila lakaoly.
Ny gorodona vita amin'ny hazo matevina telo sosona dia azo ampidirina amina hidin-trano, izay tsy misy lakaoly mandritra ny fametrahana; raha toa kosa ny composite hazo marika matevina misy rindrina matevina, izay mitaky fametrahana lakaoly mandritra ny fametrahana. Hatramin'izao dia fantatry ny rehetra fa tsy ny lakaoly ihany no misy ny laka telo, fa tsy misy toerana hampiasa lakaoly. Raha ampitahaina amin'ny takelaka bebe kokoa, ny mandrafitra kitay matevina telo sosona dia tsy vitan'ny hoe mahasalama sy mahasalama ihany ny tontolo manodidina ny resaka atiny lakaoly sy ny fitsaboana amin'ny fametrahana.
Inona no tsy mampitovy ny gorodona hazo matevina sosona sy ny gorodona hazo matevina misy sosona telo sosona Ny atiny mifandraika
1. Raha ampitahaina amin'ny gorodona vita amin'ny hazo mavesatra, lehibe ny habe. 2. Misy karazany maro ny loko, izay afaka manao simulate isan-karazany amam-borona vita amin'ny hazo voajanahary na m...
Ankehitriny dia mihamaro ny fianakaviana mampiasa gorodona vita amin'ny hazo amin'ny haingon-trano, fa ny fomba hihazonana ny gorodona vita amin'ny hazo foana dia aretin'andoha foana. Andao arahana m...